ပင်းတယသို့ အလည်တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Local Guides » ပင်းတယသို့ အလည်တစ်ခေါက်	10
Posted by manawphyulay on Jan 7, 2015 in Local Guides, Photography, Travel | 10 comments
အမြဲ ရေတွေ စိမ့်ထွက်နေလို့ ရွှေချလို့မရတဲ့ ဘုရားတွေပါ… ချွေးထွက်ကိုယ်တော်လို့လည်း ခေါ်ပါသေးတယ်…
ပင်းတယတောင်တက်လမ်းကို အပေါ်စီးမှ ရှုမြင်ခြင်း
Kaung Kin Pyar says: သွားလည်ချင်မိတဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ မနောရေ….
တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတစ်ခုကို သွားချင်တယ်….။
Tour Package လား..။ ဒါမှမဟုတ်…ကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့ကိုယ်သွားတာလား….။
တကယ်လို့ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် သွားမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီမှာ ဒေသတွင်း သွားလာရေးကို ဘယ်လိုစီစဉ်ရပါ့…။
ခုလောလောဆယ် ပုံလေးတွေ မြင်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
manawphyulay says: အမှန်တကယ်တော့ မနော သွားဖို့ အစီအစဉ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ချောင်းသာသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာ အဆင်မပြေတော့ တောင်ကြီးဘက်သွားမယ်ဆိုပြီး Tour Package နဲ့လည်း မသွားပဲ တောင်ပေါ်သားကားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီး ဟဲဟိုးမှာ အသိအိမ်တည်းပြီး လည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နေရာတော့ အတော်စုံစုံ ရောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာသွားမယ်ဆိုရင်လည်း အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ နေရာစုံရောက်အောင် သွားစေချင်ပါတယ်။ မနောရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေ ပြောပြပေးပါမယ်။
Kaung Kin Pyar says: ကျေးဇူးမနောရေ….
အဲ့ဘက်မှာ ဟိုဟိုဒီဒီသွားချင်ရင် ဘာများသုံးလို့ရလဲဟင်…။ ကားစင်းလုံးငှားလို့ရလား…။ ဆိုင်ကယ်ငှားလို့ရလား…
နေပြည်တော်လိုမျိုးဆိုရင် Cycle Taxi လိုမျိုးတို့ တုတ်တုတ်လိုမျိုးတို့ကို အသုံးပြုကြတယ်လေ…။
အဲ့ဒီဘက်မှာရော ဘယ်လိုမျိုးတွေ သွားလာရေးအတွက် ရှိကြလဲ…။ သွားရင်တော့ လူများမယ်..၊ ကားငှားတာကိုတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်..။ မရလဲ နောက်တစ်မျိုးပေါ့လေ…
kyeemite says: .မရောက်ဖူးသေးဘူးဗျို့…ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာသွားလည်ချင်စရာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ရောက်ဖူးတယ် ပြန်သွားချင်နေတယ်
ပုံတွေမြင်တော့ ထပ် သတိရသွားပြီ
manawphyulay says: ဟုတ်တယ်နော် ဘယ်နှခါသွား သွား ထပ်သွားချင်တဲ့ နေရာထဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ်ပိုင်းလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
Maung Thura says: ပင့်ကူကြီးကို မုန်းတယ်..
ဟိုကောင်မလေး ခြောက်ယောက်ကို စားတော့ ဝါးတော့မတတ် ကြည့်နေလို့
manawphyulay says: မမြင်အောင် ရိုက်ပါတယ်ဆိုမှ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်သေးတယ်။ သူများတွေ ရိုက်နေတာကို မပါစေချင်လို့ အဝေးကနေ လှမ်းဆွဲလိုက်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။
Kaung Kin Pyar says: ရှေ့မှာ ကောင်မလေး ၆ ယောက်ပါတာ အမြင် စူးရှတဲ့ မောင်သူရ ပြောမှပဲ သတိထားမိတော့တယ်….။
ငါ နိကို ဒေါ်ဖွားမေနဲ့ တိုင်ပြောမယ်…
Maung Thura says: တိုင် တလုံး ငါးမတ်